‘प्रधानमन्त्री ओली गुटलाई सरकारी निर्णय लाग्दैन ?’ « Janata Samachar
‘प्रधानमन्त्री ओली गुटलाई सरकारी निर्णय लाग्दैन ?’
प्रकाशित मिति : १३ बैशाख २०७८, सोमबार १६:२८
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी निर्णय नमानेको भन्दै विरोध गर्नुभएको छ । सामाजिक सञ्जालमा सोमबार नेता रावलले प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना संक्रमणको अवस्थामा भेला र बैठक गर्दै हिँडेको भन्दै विरोध जनाउनुभएको हो ।
उहाँले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जोगिन अरुलाई विभिन्न मापदण्ड तयार गरी लागू गर्ने तर प्रधानमन्त्रीले भने आफैँ भेला, बैठक र समारोह गरिरहेको भन्दै आपत्ति व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले प्रधानमन्त्री ओली गुट सरकारी निर्णय र कानूनभन्दा माथि हुने गोप्य अध्यादेश जारी भइसक्यो कि भन्दै प्रश्न समेत गर्नुभएको छ ।
नेता रावल लेख्नुहुन्छ, ‘कोरोनाबाट जोगिन अरूलाई भेला, बैठक, समारोह नगर्न भन्ने तर प्रम ओली र उहाँका निकटस्थहरू भेला, बैठक, समारोह गरिरहने, यो के हो ? प्रम ओली गुटलाई सरकारी निर्णय लाग्दैन र ? कि उहाँको गुट सरकारी निर्णय र कानूनभन्दा माथि हुने कतै गोप्य अध्यादेश जारी भइसक्यो ? कानूनका सामु सबै बराबर होइन र ?’